DHAGEYSO Ciimada amaanka Soomaaliya oo sheegay inay burburiyeen Idaacad afka AL-shabaab ku hadasha.
Abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Gen Cabdullaahi Cali Caanood ayaa sheegay in howlgalo Shalay ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose lagu burburiyay xarumo muhiim ah oo ay Al-Shabaab halkaasi ku lahaayeen.
Taliyuhu wuxuu xusay in ciidamada dowladda ay burburiyeen labo gaari oo siday Qaraxyo, loona malaynayo inay ku wajahnaayeen magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya sidoo kale ay gacanta ku dhigeen agab fara badan oo uu sheegay inay lahaayeen dagaalamayaasha AL-shabaab.
Gen Caanood abaanduulaha ciidamada xooga dalka Soomaaliya wuxuu intaasi ku daray inay burburiyeen Radio ku hadlayay afka AL-shabaab.
Abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Gen Cabdullaahi Cali Caanood Wuxuu kaloo sheegay in ciidamada dowladda ay sii wadi doonaan howlgaladaasi ilaa iyo inta Al-Shabaab laga saarayo dhamaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeelaha Hoose.
Hadalka abaanduulaha ayaa ku soo aadaya xili shalay Ciidamada dowladda Soomaaliya ay howlgal ka dhan ah Al-Shabaab ka bilaabay gobolka Shabeellaha Hoose oo deegaano badan ay gacanta ku hayaan kana mid ah meelaha ay AL-shabaab inta badan weeradad ka soo qaadaan.
Wararkii ugu danbeeyay ee ka imaanaya deegaanadii ciidamada dowlada Soomaaliya ay shalay la wareegeen ayaa saaka sheegaya in ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed gaara ahaan cutubka afraad ee ciidamada Danab ay dib uga baxeen deegaanadaasi.
← DHAGEYSO Maamulada degmooyinka Muqdisho oo lagula xisaabtamayo nadaafada caasimada.
DHAGEYSO Barnaamijka Hoggaanka Star Arrimaha Kenya 13-02-2013 →